Apnea ụra, Ọgwụ Copd, Ọrịa iku ume - Micomme
OH-70C Nnukwu Highzọ Nasal ...
Igwe anaghị adọ ndị mmadụ na-adọ adọ adọ
m usoro Non-invasive ikuku ...
Igwe ojii igwe ojii na-ahụ maka nlekọta ahụike M + na-enwe ike inyocha nyocha ahụ
Akwukwo ozi anyi, ihe omuma ohuru banyere ngwa ahia anyi, ozi na onyinye anyi puru iche.
Pịa maka ntuziaka
Na-etinye ịdị mma mgbe niile na ntinye anya na ngwaahịa dị mma maka usoro ọ bụla. Anyị gafere asambodo sistemụ njikwa dị mma nke ISO9001 na sistemu ahụike-elu nke ISO13485.
Akwụkwọ nke TÜV SÜD, ụlọ ọrụ mgbasa ozi ama ama ama ama ama nke German nyere site na TÜV SÜD, nke na-egosi na ndị isi mba ụwa nabata teknụzụ ngwaahịa na usoro nke ụlọ ọrụ ahụ. Anyị enwetakwala asambodo na asambodo nke NMPA (CFDA na China).
Ọkachasị ụlọ ọrụ na - esite na ngwa ikuku na - eme ka ikuku na - adịghị emerụ ahụ ihe dị ka afọ asatọ. Factorylọ ọrụ anyị dị na Changsha, China.
Usoro ọgwụgwọ COPD maka ụlọ ọgwụ
Ọgwụ Na-eme Njikere
Usoro ọgwụgwọ COPD maka ezinụlọ
Ngwa Ọgwụ Hospitallọ Ọgwụ
Patenti N ’mba
Ihe Nchoputa Sayensi
Imekọrita na obodo na mpaghara
Lụọ ọgụ megide COVID-19, Micomme ọnụ gị
Na-ebu agha megide COVID-19, Micomme na gị Companieslọ ọrụ sitere na China ...
Ndị na-emepụta ventilashị nke China na-akwalite mmepụta na agha ụwa niile megide oria COVID-19
Ndị na-emepụta ventilashị nke China na-akwalite nrụpụta na ọgụ zuru ụwa ọnụ megide oria COVID-19 Site na mmụba nke ihe ndị mba ọzọ na-achọ n'oge oria COVID-19, ndị na-emepụta ikuku na China na-abawanye p ...
Iji kwado ndị obodo ma soro na-ekere òkè n'onyinye onyinye nke Red Cross Society nke Hunan Province
Iji kwado ndị obodo ma soro na-ekere òkè n'onyinye onyinye nke Red Cross Society nke Hunan Province Micomme setịpụrụ ụkwụ na Hunan wee gaa ụwa. N'oge mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ nwetara nlekọta nke ndị isi na ndị ọkachamara na ọkwa niile. Iji nwetakwuo inyere ndị ...
Ọtụtụ ụdị ikuku iku ume nke ikuku na-anaghị efesi ike
Ofdị ventilashị eji maka ọrịa dị iche iche. N'ikwu okwu n'ozuzu, a na-eji ikuku ventilashị nke nwere otu ọkwa maka ndị ọrịa nwere snoring; Igwe na - eku ume ikuku abụọ nke ST maka ọrịa nkuume. Ọ bụrụ na ọ bụ usoro dị mgbagwoju anya karị, ọ nwere ike ịdị mkpa ị ...